Kulankii labaad ee Xarunta Cilmi baaristaTiiraanyadda iyo Caddaaladda oo lagu qabtay Garowe. | puntlandi.com
Tuesday, August 8th, 2017 | Posted by Pi
Kulankii labaad ee Xarunta Cilmi baaristaTiiraanyadda iyo Caddaaladda oo lagu qabtay Garowe.
Garowe (Puntlandi.com) Waxaa 6 -7/08/2017 ka qabsoomey magaaladda Garowe, shirwenihii labaad ee xarunta cilmibaarista tiiraanyadda iyo cadaaladda xiliga kalaguurka ee Jaamacadda Puntland State University (PSU).
Xarunta oo jirsatey sanadkii labaad ayaa waxaa hindistey Marwadda madaxweynaha Dr. Hodan Ciise. Buddhigayaasha xarunta Dr.Hodan Ciise iyo Fowsiya Cabdiqaadir oo kaashanaya cilmibaarayaal katirsan isla jaamacadda PSU ayaa ka aruuriyey xog ka qaybgalayaasha kulanka.
Kulankan ayaa qayb weyn waxaa ka qaatey Marwadda Dr.HodanCiise, Fowsiyo, Wasaaradda Haweenka iyo qoys-kaoo ay hagaaminayso wasiir Aniso Xaaji Muumin iyo Jaamacadda PSU. Kulanka ayaa waxaa ka qaybgaley 300 oo qof, oo ka kala yimid qaybaha ka laduwan ee bulshadda.
Xarunta ayaa waxay xooga saaridoontaa sidii bulshadda Soomaaliyaad u heli lahaydna badwaarta. Si loo gaaro ujeedkaas, xaruntu waxay soo saarin aqoon iyaddoo sameynaysa cilmibaarisyo laxiriirta nabadda, cadaaladda iyo tiiraanyadda.
Intii uu kulanka socday ayaa marti badan oo ka qayb gashay waxay ka mahad celiyeen xarunta iyo dadaalka ay ugu jirto cadaaladda iyo tiiraanyo bixinta ummadda Soomaaliyeed.